भविष्यवाणी: तपाईंको व्यवसाय एक ई-वाणिज्य व्यापार हो Martech Zone
के तपाईंले हाम्रो हेर्नुभएको छ? भर्खरै सुरू गरिएको साइट? यो वास्तवमै एकदम अविश्वसनीय हो। हामीले publication महिना भन्दा बढी हाम्रो प्रकाशनको डिजाईन र विकासमा काम गर्‍यौं र हामी कति समय खर्च गर्दिन भन्न सक्दिन। मुद्दा केवल यो थियो कि हामी द्रुत गतिमा पर्याप्त चाँडो विकास गर्न सक्दैनौं। मेरो विचारमा, आज स्क्र्याचबाट विषयवस्तु निर्माण गर्ने जो कोहीले उनीहरूसँग काम गरिरहेको व्यवसायलाई वेवास्ता गर्दैछ।
म बाहिर जान र खर्च गर्न सक्षम थिए Magazineamagazine डिजिटल म्यागजिन विषयवस्तुमा, हाम्रो अनुकूलन एकीकरणको लागि अनुकूलन विषयवस्तु निर्माण गर्‍यो, विषयवस्तुको ब्रान्डि re पुन: छाला, र म भित्र छु र हप्ता भित्र चलिरहेको छु। हामी अझै केही अतिरिक्त एकीकरणहरू रोल आउट गर्न गइरहेका छौं, जस्तै हाम्रो पोडकास्ट र एक व्हाइट पेपर लाइब्रेरी, तर तपाईं थीमको साथ आएकोमा चकित हुनुहुनेछ।
एउटा पक्ष चाहिन्छ कि यो आयो WooCommerce पूर्ण एकीकृत। वू यसको विषयवस्तुहरू र वाणिज्य इञ्जिनको साथ थियो हालसालै Automattic द्वारा खरीद गरिएको - WordPress कि स्वामित्व राख्ने कम्पनी। मेरो नम्र रायमा, म विश्वास गर्दछु कि यो एक शानदार निर्णय हो। किन? किनभने मैले पूर्वानुमान गरेको छ कि प्रत्येक एकल कम्पनी - या त B2B बाट B2C - को वेब मार्फत स्व-सेवा अर्डरिंगको केही पक्ष हुनेछ।
खुद्रा विक्रेताहरू र ई-कॉमर्स कम्पनीहरू यसमा पहिले नै छन्। शिकागोमा आईआरसीईमा एक ध्वनि हराउने ड्रम त्यो हो कि यो तपाईंको साइटमा तपाईंको स्टोरमा बेच्ने बारेमा थिएन। यो हरेक अन्य साइट मा सबैको स्टोर मार्फत बेच्ने बारेमा थियो। साना खुद्रा विक्रेताहरु को लागी लॉजिकल प्रणालीहरु, सामग्री प्रणालीहरु, र पूर्ति प्रणाली छ कि तिनीहरु आफैले अनलाइन दर्जनौं स्टोरहरु लाई बेच्न को लागी उनीहरु को लागी अनुमति दिन्छ।
तथ्य यो हो कि उपभोक्ताहरू (र व्यवसायहरू) उनीहरूले खरीद गर्ने साइटमा विश्वास गर्न आउँदछन्। यदि तपाई अमेजनमा बारम्बार किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले इन्टरनेटमा केटाहरूबाट अफ्टरमार्केट फ्लोर मैट किन्न सक्नुहुन्न। तर यदि इन्टरनेटमा त्यो केटाले अमेजनमा आफ्नो फ्लोर म्याटहरू पनि बेच्दै छ, तपाईं तिनीहरूलाई खरीद गर्नुहुन्छ।
तपाईं पहिले नै अनलाइन बिक्री गुमाउँदै हुनुहुन्छ
शिकागोमा जानु भन्दा पहिले मैले एउटा ईमेल प्राप्त गरें राष्ट्रभर बीमा कि मैले मेरो कार बिल तिर्न आवश्यक छ। मैले मेरो खातामा लग इन गरें, र बिल तिर्न कुनै तरिका भेटिएन। म काममा फर्कें र मैले पछि मेरो एजेन्टलाई फोन गर्ने लाग्यो। केही दिन पछि मैले अर्को सूचना प्राप्त गरें कि मैले मेरो भुक्तानी नगरेसम्म मेरो बीमा समाप्त हुनेछ। मैले लगइन गरें र फेरि कुनै फाइदा नपुग्ने प्रयास गरें - मैले पनि पत्ता लगाउन सकेन मेरो बिल तिर्नुहोस् तिनीहरूको नयाँ सफा ईन्टरफेसमा बटन। मैले मेरो एजेन्टलाई कल गर्न एक रिमाइन्डर सेट गरें।
अर्को दिन, म काममा गएँ र व्यस्त भएँ र मेरो एजेन्टलाई कहिले बोलाउँदिन। जब म घर पुगेँ, यकीन छ कि त्यहाँ पर्याप्त ईमेल छ जुन मेरो बीमा त्यो रात आधा रातमा समाप्त हुनेछ किनभने मैले मेरो बिल भुक्तान गरेको छैन। राम्रो छैन ... म भोलिपल्ट शिकागोमा ड्राइभि driving गर्दै थिएँ र म बीमा हुने छैन।
त्यसैले मैले यसमा मेरो ब्राउजर पल्टें Geico। केही मिनेट पछि, मैले नीति खरीद गर्न एक वास्तविक-समय उद्धरण र एक राम्रो फ्याट बटन प्राप्त गरें। मैले बटन क्लिक गरें र यसले भने कि तिनीहरूले मलाई मेल मार्फत केही कागजहरू पठाउँदैछन् र एकपटक मैले यसलाई भरे पछि मेरो नीति प्रत्यक्ष हुनेछ। तिमी मसँग ठट्टा गर्दैछौ।
अर्को - प्रगतिशील। मैले मेरो जानकारी प्रविष्ट गरें र उनीहरूले मेरो र मेरी छोरी दुबैको लागि मेरो मोटर वाहन जानकारी प्रि-पपुलेट गरे। केही क्लिकहरू पछि र मसँग मेरो कारमा राख्नको लागि नयाँ नीति र बीमा कार्ड थियो। यसले लगभग १० मिनेट लिएको थियो ... र म वास्तवमा गरे पैसा बचत गर्नुहोस्। म २० वर्ष भन्दा बढी राष्ट्रव्यापी भएको हुनाले यसले मलाई अचम्मित गर्‍यो।
के राष्ट्रव्यापी यसको बीमा को कारण मलाई गुमायो? होईन, म तिनीहरूको बीमामा कुनै आपत्ति पाउँदिन र मलाई मेरो एजेन्ट मनपर्‍यो। तिनीहरूले मलाई गुमाए किनभने म आफैं अनलाइन सेवा गर्न सक्दिन।
तपाईंको व्यवसाय र मेरो व्यापार फरक छैन। हाम्रो नयाँ साइट पूर्ण वाणिज्य सक्षम छ र हामी दुबै उत्पादन र सेवाहरू हाम्रा पाठकहरूको लागि बेच्न शुरू गर्दछौं। मसँग कुनै श .्का छैन कि यो हाम्रो लागि बढ्दो राजस्व प्रवाह हुनेछ र हामीसँगै यति धेरै ग्राहकहरू प्रदान गर्ने हात-एजेन्सी सेवा बिस्तारै कम हुँदै जान्छ।
मलाई मतलब छैन यदि तपाईं लनको घाँस काटिरहनुभएको छ वा सम्बन्धविच्छेद गर्दै हुनुहुन्छ - जसरी मानिसहरूले भविष्यवाणी गरेका थिए कि हरेक कम्पनी एक प्रकाशक हुनेछ, मेरो भविष्यवाणी यो छ कि हरेक कम्पनीको ई-कमर्स साइट छिट्टै आउँदछ।
टैग: स्वत: बीमा अनलाइनस्वचालितई-वाणिज्यइकमर्सgeicoबीमाराष्ट्रभरअनलाइन बीमाअनलाइन अर्डरिंगअनलाइन स्टोरप्रगतिशीलwoowoocommerceWooThemes
प्रमाणित तरीकाहरू सामाजिक मिडिया मार्केटिंगबाट तपाईंको साना व्यवसाय लाभहरू
प्रोग्रामेटिक विज्ञापन र मार्केटिंग भनेको के हो?